Knowledge Archives - Page2of3- AtoZ Daily
Knowledge January 12, 2021
ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် ပိုက်ဆံချေးပြီး စိတ်သောကရောက်နေလျှင် …
ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် ပိုက်ဆံချေးပြီး စိတ်သောကရောက်နေလျှင် . ပိုက်ဆံချေးပြီး ဆုံးမလိုဖြစ်နေလျှင် ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် စိတ်သောက ရောက်နေလား ချေးထားသူမှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ ပြန်မပေးပဲ ကြန့်ကြာအောင်အချိန်ဆွဲနေလား ရစရာရှိသူ ငွေချေးထားသည့် ငွေရှင်သည် တနင်္ဂနွေသားသမီး ဖြစ်ပါက မွေးနေ့ နေ့လည် (၁၂)နာရီ မှ (၁)ခွဲအတွင်း အိမ်ဘုရား၌ ကံကော် ၂ ညွန့် အမွေးတိုင် (၃) […] ပိုက်ဆံချေးပြီး ဆုံးမလိုဖြစ်နေလျှင် ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် စိတ်သောက ရောက်နေလား…
သိတဲ့သူ အလွန်နည်းလှတဲ့ ပျားနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အတိတ်နမိတ်များ
သိတဲ့သူ အလွန်နည်းလှတဲ့ ပျားနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အတိတ်နမိတ်များ ယခုခေတ်မှာ လူတော်တော်များများဟာခေတ်မှီနည်းပညာတွေနောက်ကို လိုက်နေကြတဲ့ အတွက်အတိတ်နမိတ်တွေနဲ့ ပက်သက်လာရင်သိတဲ့သူ အလွန်နည်းလှပါတယ်နော်။ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီး အတွက် ဗဟုသုတရအောင် ပျားရည်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ အတိတ်နမိတ်တေကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ (၁)ဘယ်ဘက်လက်၌ ပျားစွဲပါက ငွေဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (၂)ညာဘက်လက်၌ ပျားစွဲပါက စီးပွားပျက်တတ်ပါတယ်နော်။ (၃)အိမ်ခေါင်မိုး ထုတ်တန်းမှာ ပျားစွဲပါကစီးပွားပျက်တတ်ပါတ ယ်။ (၄) ရေအိုး၌ ပျားစွဲပါက သူဌေးဖြစ်မှာပါ။ (၅)အဝတ်ပုဆိုး၌ ပျားစွဲပါက ချမ်းသာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။…
Knowledge, local news January 12, 2021
စေတနာနဲ့ လုပ်ပေးတာကို စော်ကားသလို ခံစားလိုက်ရတဲ့ အဖြစ် (ဒီလိုမျိုးကတော့ ဖြစ်မှာပဲ)
စေတနာနဲ့ လုပ်ပေးတာကို စော်ကားသလို ခံစားလိုက်ရတဲ့ အဖြစ် (ဒီလိုမျိုးကတော့ ဖြစ်မှာပဲ) “ဒါကဘယ်တုန်း” သူ့အမေလှမ်းအော်လိုက်တဲ့ အသံကြောင့်…မီးဖိုထဲလှမ်းတော့မဲ့ ပွကြီးခြေလှမ်းတို့ တုန့်ကနဲဖြစ်သွားသည်။ “မီးဖိုထဲသွားမလို့” “ဘာလုပ်ဖို့တုန်း” “ဟို…ဟို…မုန့်…လုပ်…လုပ်” ပွကြီးစကားမဆုံးသေးခင်ပင်… “တော်…တိတ်…အခုချက်ချင်းပြန်လှည့်စမ်း” “အာ…အမေကလည်း အပြင်မထွက်ရတော့ ပျင်းလို့ မုန့်လုပ်မလို့ပါဆို…အမေတို့စားတော့ လုပ်ကျွေးရတဲ့ ကျွန်တော်လည်း ကုသိုလ်ရတယ်လေ…ခုနေက အပြင်စာစားတာထက် အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင် လုပ်စားတာက ပိုပြီးစိတ်ချရတယ်လေ” “တိတ်စမ်း…နင်လုပ်လို့ ဟိုနေ့က ကြက်ဥ ၅ လုံးလည်း လွှင့်ပစ်လိုက်…
Health, Knowledge January 12, 2021
ဆေးဘက်ဝင်မှန်းတော့သိတယ် အဲလောက် အကျိုးကျေးဇူးကြီးမှန်းမသိခဲ့ဘူး. ဆေးဘက်ဝင်မှန်းတော့သိတယ် အဲလောက် အကျိုးကျေးဇူးကြီးမှန်းမသိခဲ့ အဆိပ်အမျိုးမျိုးနှင့် ရောဂါ (၁၈) ပါး ကို ပျောက်ကင်းနိုင်သော ကြောင်လျှာသီး ကြောင်လျှာရွက် ကြောင်လျှာပွင့် ကြောင်လျှာပင် (Indian Trumpet Flower , Raw Material , Oroxylum indicun Vent , Bignoniaceae)။ မြန်မာ့တိုင်ရင်းဆေးပညာ အသစ် တဖန် ပြန်လည် ထွန်းကားပါစေသော်။ ကြောင်လေးပင် မြွေနှင့်…
အပျိုကြီး ၊ လူပျိုကြီး ကျိန်းသေ ဖြစ်လာမယ့်သူတွေမှာသာ မြင်တွေ့ရမယ့် စရိုက်လက္ခဏာများ
လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီး ကျိန်းသေ ဖြစ်လာမယ့်သူတွေမှာသာ မြင်တွေ့ရမယ့် စရိုက်လက္ခဏာများ အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီးဆိုတာ လွယ်လွယ်လေး ဖြစ်သွားကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့တွေမှာ တခြားသူတွေထက် ထူးခြားနေတတ်တဲ့ အရာတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကပဲ သူတို့ကို လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီးတွေ ဖြစ်သွားစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီး ဖြစ်လာမယ့် သူတွေမှာ ဒီလို အချက်တွေ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ၁။ ဇီဇာကြောင်တယ် ဒါကတော့ အဓိက…
Knowledge December 26, 2020
သင်ဟာ အသုံးဖြုန်းကြီးသူဖြစ်ရင်တောင်မှ ပိုက်ဆံ တော်တော်များများစုမိနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
သင္ဟာ အသုံးျဖဳန္းႀကီးသူျဖစ္ရင္ေတာင္မွ ပိုက္ဆံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားစုမိႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း မ်ား ၁။ဒီနည္းလမ္းက၁ႏွစ္(သို႔) ၅၂ပတ္ ၾကာပါလိမ့္မယ္။ နည္းလမ္း ကေတာ့အရင္အပတ္ကစုတဲ့ပိုက္ဆံထက္ဒီအပတ္ပိုစုရမယ္။ဥပမာဒီအပတ္၅ေဒၚလာစုရင္ေနာက္အပတ္၁၀ေဒၚလာ၊ေနာက္တစ္ပတ္၁၅ ေဒၚလာစသည္ျဖင့္စုပါ။၁ႏွစ္ျပည့္သြားတဲ့အခါပိုက္ဆံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားစုမိမွာပါ။တကယ္လို႔အမ်ားႀကီးစုဖို႔ခက္ခဲတယ္ဆိုရင္အသုံးစရိတ္ေလ်ာ့ခ်ၿပီးတစ္ပတ္တစ္ခါစုမယ့္အစားတစ္လတစ္ခါစုပါ။ ၂။ဒုတိယနည္းကကိုယ္ဝယ္မယ့္ပစၥည္းေတြထဲေငြအခ်ိဳ႕ကိုစုတာပါ ဥပမာ သင္က ဆြယ္တာ ၁ထည္ကိုေဒၚလာ၃၀နဲ႔ဝယ္မယ္ဆိုရင္၃ေဒၚလာကိုစုပါဒီနည္းလမ္းကသင့္မွာcredit card ရွိမယ္ဆိုရင္ပိုအဆင္ေျပပါတယ္ဘဏ္အမ်ားစုကသင္ဝယ္မယ့္ပစၥည္းေတြထဲကေငြအခ်ိဳ႕ကိုစုေပးပါတယ္။ ၃။ေနာက္ဆုံးနည္းကေတာ့မေကာင္းတဲ့အေလ့အက်င့္ေတြထဲကပိုက္ဆံကိုစုတာပါ။ ဥပမာသင္က႐ုံးေနာက္က်လို႔ပိုက္ဆံအျဖတ္ခံရတာမ်ိဳးကိုမရွိေအာင္လုပ္ပါ၊ဒီနည္းလမ္းကမေကာင္းတဲ့အေလ့အက်င့္ေတြကိုေပ်ာက္ေစၿပီးတစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲေငြလည္းစုမိပါတယ္။ Writer – Min Thu ( XYZ NEWS ) Unicode သင်ဟာ အသုံးဖြုန်းကြီးသူဖြစ်ရင်တောင်မှ ပိုက်ဆံ တော်တော်များများစုမိနိုင်မယ့် နည်းလမ်း…
Knowledge December 24, 2020
အမှိုက်တွေကို မီးရှို့ပြီး သူများကို ဒုက္ခပေးမယ့်အစား တကယ်အသုံးဝင်မယ့် နည်းလမ်း
သစ္႐ြက္ေျခာက္အမႈိက္ေတြကို မီးရႈိ႕ၿပီး သူမ်ားကို ဒုကၡေပးမယ့္အစား တကယ္အသုံးဝင္မယ့္ နည္းလမ္း ၁။ ကန္တစ္ခုေဆာက္ပါ။ သံဇကာနဲ႔ေဆာက္တာအလြယ္ဆုံး။ သံဇကာ ၉၀၀၀ ဖိုးဝန္းက်င္ဝယ္၊ ထိပ္ႏွစ္ဘက္ကိုစုၿပီး သံႀကိဳးနဲ႔ခ်ည္။ ျခင္းလိုမ်ိဳးအဝိုင္းေလးရသြားၿပီ။ တေနရာမွာ ေနရာခ်၊ ဒါပါပဲ။ တခ်ိဳ႕က ဝါးကတ္၊ တခ်ိဳ႕က သြပ္ျပား၊ တခ်ိဳ႕က ပဲလတ္သစ္သားခုံ၊ ေကာ္ပဲလတ္ခုံ စသည္ ႏွစ္သက္ရာ လြယ္ကူရာပစၥည္းမ်ားသုံးၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ နယ္ဘက္မွာဆို ေျမက်င္းတူးၿပီးလုပ္လဲရပါတယ္။ ၂။ တေန႔တာ တံျမက္စည္းလွည္း စုလို႔ရလာသမွ်…
Knowledge December 23, 2020
လာမည့် New Year 2021 အင်္ဂလိပ် နှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့၏ ထူးခြားချက်နှင့်အောင်မြင်မှုတွေ ပြည့်မယ်ဆိုတဲ့ နိမိတ်
ယခုလာမည့်2021 အင်္ဂလိပ်နှစ်ဆန်း၁ရက်နေ့၏ ထူးခြားချက် ဒီဇင်ဘာလအကုန် New Year အစ အင်္ဂလိပ်နှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ 1.1 2021 နေ့ဟာ သောကြာနေ့ကျပါသည်။ သောကြာဆိုတာ အအေးဓာတ်ကိုဆောင်ပါတယ် သောကြာဂြိုလ်တိုင်ဟာ ပူးမင်း ဖြစ်ပြီးအေးချမ်း တိတ်ဆိတ်ခြင်းကို လိုလားတဲ့ အကောင်လေးပါ။ သောကြာသားသမီးတွေဟာ အေးအေးချမ်းချမ်းနေတတ်သူတွေဖြစ်သလို ထူးချွန်ထက်မြက်ချမ်းသာကြသူတွေလဲ များပါတယ်။ ၂၀၂၁ ရဲ့ တနှစ်တာလုံးဟာ လူသားအားလုံးအတွက် အေးချမ်း အောင်မြင်မှုတွေ ပြည့်မယ်ဆိုတဲ့ နမိတ်ပါ….။ ၂၀၂၀…
Health, Knowledge December 19, 2020
ေဆာင္းရာသီ ႏွင့္ အဆစ္ေရာင္အကိုက္အခဲေရာဂါ အဆစ္ေရာင္ ေရာဂါမ်ားတြင္ ေလးဖက္နာႏွင့္ ေဂါက္ေရာဂါေခၚ အဆစ္ႀကီးမ်ား တစ္ဆစ္ခ်င္းေရာင္ သည့္ ေရာဂါမ်ားပါဝင္သည္။ ေလးဖက္နာေရာဂါတြင္လည္း ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေလးဖက္နာႏွင့္ ေသြး ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေလးဖက္နာ၊ အေရျပားထူေလးဖက္နာ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ထိုေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ ေဆာင္းဥတုကို ေၾကာက္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ပူလြန္းေသာ ေႏြရာသီသာမက ေအးလြန္းေသာ ေဆာင္း ဥတုမွာပါ ေရာဂါတိုးၾကသည္။ အကိုက္အခဲဒဏ္ ပို၍ခံရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လက္ဆစ္ေလးမ်ား ေရာင္သူ…
Knowledge, Tech December 18, 2020
အရေးပေါ် မိုဘိုင်းဖုန်း အားသွင်းလို့ရအောင် ပြုလုပ်နည်း
မိုဘိုင္းဖုန္း ဆိုတာ ဒီေန႔ေခတ္မွာမရွိမျဖစ္အရာေတြျဖစ္လာပါၿပီ ။ေတာထဲေတာင္ထဲ ခရီးထြက္ တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ GPS စနစ္အသုံးျပဳဖို႔အတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္ းဟာအလြန္အေရးပါတဲ့အရာတစ္ခုပါ ။ Power Bank ေတြရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ မီးလုံးဝမရတဲ့ေနရာမ်ိဳးမွာ ဖုန္းေရာ ပါဝါဘန႔္ေရာ အားကုန္ သြားတဲ့အခါ ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမလဲ။AA ဓါတ္ခဲေလးေတြဟာ ေက်ာပိုးအိတ္ထဲအလြယ္တကူထည့္ယူသြားလို႔ရတဲ့ဓါတ္ခဲေလးေတြပါ။ ဒီ AA ဓါတ္ခဲေလးေတြကိုသုံးၿပီး အေရးေပၚ Power Bank ေလးဘယ္လိုျပဳလုပ္သြားရမလဲဆိုတာကိုေျပာျပပါမယ္။USB ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို ျဖတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အစိမ္း ၊ အျဖဴ ၊…